पुस २९, काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसबीच आर.टि.जि.एस. (RTGS) सम्झौता भएको छ । पुस २८ गते नेपाल क्लियरिङ्ग हाउससँग भएको सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरुले IPS/Connect IPS सुविधा अन्र्तगत आर.टि.जि.एस. (RTGS) सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन्, जसबाट अन्तर बैंक भुक्तानी सुव... जारी राख्नुहोस...
करोड भन्दा बढी बीमा रकम मृतकको श्रीमतीलाई हस्तान्तरण
पुस २९, काठमाडौँ । मंगलबार नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडद्वारा एक करोड भन्दा बढी बीमा रकम मृतक इन्द्र प्रसाद दंगालको श्रीमतीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यस इन्स्योरेन्सले विर्तामोड झापा स्थित होटल ग्राण्ड प्यासिफिकमा कार्यक्रम आयोजना गरी स्व. इन्द्र प्रसाद दंगालको मृत्यु दावी भुक्तानी उनले ईच्... जारी राख्नुहोस...
पुस २९, काठमाडाैँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले मंगलबार काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं ६ लैनचौर स्थित लैनचौर ब्याङ्क्वेटमा आफ्नो १५ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । उक्त साधारण सभाले आ. व.२०७५/०७६ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिबेदन पारित गर्नुको साथै लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सहित २०७६ आषा... जारी राख्नुहोस...
पुस २९, काठमाडौ । प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लि.ले सोमबार तेइसौं बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । ललितपुर स्थित ज्यापू प्रज्ञा भवनको सभा कक्षमा संचालन गरिएको साधारण सभामा संस्थाका अध्यक्ष किशोर कुमार महर्जनले संचालक समितिका तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्दै संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा गरेका कार्यक्रम... जारी राख्नुहोस...
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको सातौं वार्षिक साधारण सभा आज, बम्पर लाभांशको प्रस्ताव
पुस २९, काठमाडौं । सुनसरीको दुहवीमा प्रधान कार्यालय रहेको फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.को सातौं वार्षिक साधारण सभा आज बस्दैछ । फरवार्डको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्न लागेको यसपटकको साधारण सभाले आफ्ना शेयरधनीलाई गत वर्षको मुनाफाबाट बम्पर लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । फरवार्डले गत वर्ष... जारी राख्नुहोस...
पुस २८, काठमाडाैँ । सिद्धार्थ बैंकले सोमबार गोरखाको गोरखा बजारमा र उदयपुरको कटारीमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले सर्वसाधारण तथा उद्यमीे माझ सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोबार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त शा... जारी राख्नुहोस...